တရုတ်စက်မှုအမှုန့် Pulverizer ကြိတ်စက် Grinder စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူ |ခုန်ပါ။
စက်မှုအမှုန့် Pulverizer ကြိတ်စက် Grinder
အနုမှုန့် ငရုတ်သီးကြိတ်စက် ကြိတ်စက်
စက်မှုအမှုန့် Pulverizer ကြိတ်စက်
1. စက်ပစ္စည်း ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်နှင့် လက္ခဏာများ
ဤစီးရီး၏ မြန်နှုန်းမြင့် သံမဏိ အကြိတ်အနယ် များသည် အားလုံးသော ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းပုံတွင် ခိုင်မာပြီး လည်ပတ်မှုတွင် တည်ငြိမ်ပါသည်။၎င်းသည် ကောင်းမွန်သော သံချေးတက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ကြေမွသောပစ္စည်းများ၏ သန့်ရှင်းမှုကို သေချာစေနိုင်သည်။
ဤအမှုန့်များကို အဓိကအားဖြင့် အရင်း၊ ပိုက်၊ ပင်မရိုးတံ၊ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောအချပ်ပြား၊ ပုံသေအချပ်ပြား၊ မျက်နှာပြင်၊ ခုန်ပေါက်စသည်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောအချပ်ပြားကို ပင်မရိုးတံပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားပြီး၊ မြဲမြံသောဒစ်ပြားကို ပင်မရိုးတံပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားပြီး၊ disc ကို ရှေ့ကာဗာတွင် တပ်ဆင်ထားပြီး၊ မော်တာ စတင်ပြီးနောက်၊ ရွေ့လျားနိုင်သော ပန်းကန်ပြားသည် မြန်နှုန်းမြင့် လည်ပတ်ရန်အတွက် ပင်မရိုးရိုးအတိုင်း လိုက်နေပါသည်။
2. အမှုန့်ကြိတ်စက်၏ အလုပ်လုပ်ပုံ
ဤအကြိတ်စက်၏ အပေါ်ပိုင်းနှင့် အောက်ဘက်တွင် hoppers များရှိသည်။ပစ္စည်းကို အပေါ်ဘက် hopper ထဲသို့ထည့်ကာ အပေါ်ဘက်တွင်ရှိသော hopper ၏အောက်ခြေရှိ baffle ကိုဖွင့်ပြီးနောက်၊ ပစ္စည်းသည် fixed plate ၏အလယ်အပေါက်မှတဆင့် အောက်ဘက် hopper မှစီးဆင်းသွားပြီး pulverizer ၏အပေါက်ထဲသို့ဝင်သွားပါသည်။ရွေ့လျားနိုင်သော ဒစ်နှင့် ပုံသေဒစ်၏ မြန်နှုန်းမြင့် နှိုင်းယှဥ်လည်ပတ်မှုကြောင့်၊ ၎င်းတို့၏ ဂီယာကွင်းများသည် အလွှာများစွာတွင် တုံ့ဆိုင်းသွားသောကြောင့်၊ ပစ္စည်းများသည် ၎င်းတို့၏ နှိုင်းရရွေ့လျားမှုအတွင်း ကြေမွသွားကြသည်။အမှုန့်ကြိတ်ထားသောပစ္စည်းများကို စက်ဆန်ခါဖြင့် စစ်ထုတ်ပြီး ဆန်ခါအပေါက်များမှတစ်ဆင့် အောက်ခြေရှိ ထွက်ပေါက်များမှ စီးဆင်းသွားကာ အကြမ်းထည်များကို စက်အတွင်းတွင် ကျန်ရှိနေစေပြီး အမှုန့်များကို ဆက်လက်၍ အမှုန့်ပြုလုပ်ထားသည်။
အတိုင်းအတာ- 550*600*600mm (စိတ်ကြိုက်)
ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်- <50-10kg/h (စိတ်ကြိုက်)
Spindle အမြန်နှုန်း: 2800 rpm
စွန့်ထုတ်မှု ဒဏ်ချက်- 20/100 မီလီမီတာ
အလေးချိန်: 28 ကီလိုဂရမ်
ယခင်- 3D Motion Mixer စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Powder Mixer Material Blender
နောက်တစ်ခု: ပုလင်းအဝိုင်း ပုလင်းစွပ်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းစက်
စက်ရုံတိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်း လုပ်ငန်းသုံး ဘက်စုံသုံး...
ငရုတ်ကောင်းစက် ပြောင်းဖူးမှုန့်ကြိတ်စက် Multi-f...
စျေးအသက်သာဆုံး စိတ်ကြိုက်အစားအစာ Colloid Mill Grinder V...